ikhaya » Okufumaneka » Ukuguqula Isitoreji sibe yiNzuzo yokuKhuphisana
Ukuguqula Isitoreji sibe yiNzuzo yokuKhuphisana
Ngu-Adrian Herrera, uMongameli weNtengiso, uCaringo
Ukunyuka kwebhodi ebanzi, ifu kunye nezixhobo zeselula ziye zatshintsha ngokusisigxina iipatheni zokufikelela zabantu bonke kwizoqoqosho ezintsha zedijithali. Ngoku, gcina kwaye izinto ezigcinwe zilindeleke ukuba zifumaneke naphi na kuyo nayiphi na ifowuni. O ... kwaye akukho mntu ufuna ukuhlawula.
Oku kuba yinkinga enzima kakhulu kwi-Media & Entertainment (M & E) isikhala ngenxa yokunyuka kwamafayile efayili ngokukhawuleza, ukutshintsha umzekelo umthengi wokujonga izinto (umsila omdala, i-VOD, ukusika intambo, ukubukela i-binge, njl njl.) Kunye nokulindela komxholo abavelisi beempahla zokuhlala kwi-intanethi kwaye bafumaneke ngokukhawuleza ngokuqhubekayo. Imibutho ye-M & E eyanelisayo ezi zicelo zifumana ukugcina abo abathengi nababukeli. Abo bangenakukwazi ukugqitywa ekugqibeleni balahlekelwe ngabaxhasi babo kunye nababukeli. Ngoko ujika njani ukulindela "ukukhulula" ukugcinwa kunye nokufikelela "kwangoko" kwingozi enkulu ebhizinisini lakho kwinzuzo yokukhuphisana? Impendulo-njengengxaki ezininzi eziqhutywe yi-paradigm shifts-isiseko seziseko. Uluhlu lwesitoreji esingabonakaliyo.
Emva kwexesha uFrank Zappa wathi, "Utshintsho aluyimfuneko kuphela, akunakukhunjulwa." Ngaloo ndlela, ezobuchwepheshe eziphazamisayo ezifana nokugcinwa kwezinto ziya kuba yindawo evamile kwimveliso ye-M & E kwixesha elizayo. Okwangoku, ukusebenza kwezinto ezigcinweyo akusebenzi - mali ngenxa yokusebenza kwemisebenzi, iinkqubo, kunye nezicelo zenzelwe ubuchwepheshe obuthile obufana ne-NAS kunye ne-tepi. Oku kunjalo, utshintsho.
Ukuqonda ukuba kutheni kushintshana, kufuneka siqonde ukuba kutheni i-NAS kunye ne-tape ayisekho njengendlela yokugcina kuphela ubuchwepheshe kwiziko leenkcukacha ze-M & E. I-NAS iyabiza kakhulu kwaye kunzima ukuyigcina. Nangona xa kunikwe ihhafu, iindleko zokugcina izibonelelo, iindleko zokugcina, i-data center footprint kunye nemida kwizinga liya kuphelisa amandla akho okubonelela ukugcina ixesha elide kwiilayibrari ezinkulu ze-digital assets. Le nyaniso yajika abaninzi kwimboniselo ye-M & E ukuba ibambe, ngokukodwa njengendlela ephantsi kakhulu yokugcina impahla. Kodwa iindleko zecala, ezingenakukwazi ukuhlula, ukukhangela nokukhawuleza ukuhambisa umxholo ngoku zibeka abo basebenzise iteksi ekukhuseleni.
Zombini i-NAS kunye ne-tape iya kuhlala inendawo kwiziko leenkcukacha ze-M & E. I-NAS okanye i-fayile-based based technologies eyenzelwe i-I / O iyimfuneko xa abantu abaninzi bebambisana kwiifayile ezinkulu kwindawo yenethiwekhi yendawo (LAN). Apha, ukusebenza kunye nokufakela iifayile kubalulekile. Kwaye, kuya kuhlala kusekho indawo yokugcina iindleko eziphantsi kweendleko kwi-tepi kwisicwangciso esilungileyo sokulondoloza esiquka ukubuyiswa kweentlekele (i-DR). Oko kwathiwa, uninzi lwezinto zedijithali kwixesha elizayo liza kugcinwa kwisitoreji sento. Ukuqhubela phambili kwinto yokugcinwa kwezinto kunye nokulungiswa kwendawo, ukuphathwa kweefa kunye nezinye izicelo ezikhoyo kunye nemisebenzi yokusebenza iyakwenza ukuba ube ngumqeqeshi we-M & E, ukuba usebenzise ubuchule obuninzi obunokugcinwa kwezinto. Ngamanye amazwi, ngoku unokuhambisa izitshini zakho zedijithali (aka, iinkqubo zakho zangaphakathi) malunga nombane wakho wedijithali ukuze usebenzise ngokupheleleyo ukugcinwa kwezinto.
Oku kukhokelela kumbuzo weso sizathu sokugcina into ehlukileyo. Ukugcinwa kwezinto kudibanisa ukugcinwa, ukukhonza ngewebhu, kunye nokukhuselwa kwedatha kwiphakheji elungileyo, elungileyo le-based based software. Ukugcinwa kwempahla kusebenza kwizinto eziphathekayo zezinto eziphathekayo, ukuhambisa uninzi lweelayibrari yakho yexabiso kwinqanaba leendleko ezifanelekileyo. Iproprietary hardware, i-backup, ukukhonza ngewebhu, ukuhanjiswa komxholo kunye neendleko zokusebenza kuyancitshiswa. Ngenye indlela, i-CAPEX kunye ne-OPEX zancitshiswa ngelixa zidibanisa ubuchwepheshe obunzima kwi-platform eyenza i-petabytes kunye neendawo ezinokuthi zidibanise indawo ezahlukeneyo. Ngokomlando, umngeni ube yimfuneko yokuphuhlisa kwi-API ye-proprietary okanye ukuguqula i-workflows ekhoyo kunye nezicelo. Kodwa, kukho ukuphucula okubonakalayo ekuxhaseni iinkqubo eziqhelekileyo ezifana neCIFS / SMB kunye ne-NFS. Phantse bonke abathengisi beprojekthi enkulu kwi-M & E space manje baxhasa iS3 API. Oku kuthetha ukuba ngoku unganceda ukugcinwa kwezinto, iteknoloji enye eyenza amafu amaninzi, akhuselekile kwiziko lakho leenkcukacha, kwaye kaninzi akanakho utshintsho kwimisebenzi yakho ekhoyo okanye iinkqubo.
Oko kwathiwa, akuzona zonke izitolo zento ezenziwe zilinganayo. Kukho izisombululo ezimbalwa ezisekelwe kwiifayile zeefayile kwaye ngoko ke uzuze ezo zithintelo zenkqubo yefayile. Ekuhloliseni kwakho, kufuneka ukhangele ezi zilandelayo izibonakaliso zeplani yesitoreji esilungeleleneyo:
Indawo yokuqhuba i-Hard kwaye zonke iifayile kwi-chassis yakho yomncedisi kufuneka zisetyenziswe kumxholo wakho. Iisombululo ezidinga iingxenye ezibalulekileyo ze-drive drive kwi-software okanye inani elithile leendawo zokuqhuba iinkcukacha kwi-database yolwazi ekugqibeleni kunzima ukulawula ngezinga, kukubiza kwi-20-30% kumncedisi kunye nomthamo onzima wecomputer.
Ubuchule bokuncedisa amandla kunye nezibonelelo ngokukhupha iiseva ezivela kwisinyithi esingenanto kufuneka kwakhona kube yinto enomdla. Cinga ngendlela i-asethi yakho ikhula ngayo ngokukhawuleza kwi-4K. Emva koko, cinga xa i-8K ibetha iminyaka embalwa ngaphantsi komgwaqo, ifuna ii-3 amaxesha ukugcina ubude besikhokelo. Ukuba kufuneka uhlasele kunye nokufakwa kwe-OS kunye neepatches ukwenzela ukongeza amandla kunye nokusebenza, uya kutshisa iiyure zabasebenzi abazixabisekileyo kwaye ube neendleko zokusebenza ezingaphezulu.
Khangela amandla okubhala / ukufunda / Hlela iifayile ngeHTTP, S3 okanye i-NFS ngokungafaniyo, kwaye ubuze umthengisi wakho ukuba angqina. Ukuxhomekeka kule mfuneko yilapho iifayile zangaphambili zeefayile zihlala khona. Kukho izisombululo kwiimarike ezenza i-YOSS (enye enye i-silo yesitoreji) kunokuba isuse ii-silos zokugcina.
Uphando olumanyanisiweyo lukwabaluleke kakhulu, kunye nemethadatha eyenziwe ngokwezifiso ezigcinwe ngento. Ziqaphele izisombululo ezifuna iinkcukacha zemethadatha. Buza nawuphi na umceli wesicelo kunye neenkcukacha eziphezulu malunga nokuphathwa kunye nokukhuselwa kwedatha kwaye abayikufumana ibali elibi lokubelana. Kukho i-DBA yezizathu ezinzima ukuzifumana.
Njengenguvulindlela endle yokugcinwa kwezinto, iqela leCaringo lenze le minyaka engaphezu kwe-12, kwaye insimu ye-M & E yi sihloko blog rhoqo.
U-Adrian "AJ" uHerrera uneminyaka engaphezu kwe-20 yamava okuzisa ukugcinwa kwezinto ezintsha, ifu kunye nesoftware kunye neenkonzo zokuthengisa. Nge-MBA esuka kwiSunivesithi yaseSan Diego State kunye ne-BS kwiinkcukacha zoLwazi kwi-University of Chapman, i-AJ isebenza njenge-VP ye-Marketing ye-VP.
SoftAtHome, MStar, iCES2017	2017-09-06
Previous: I-TV Nova ikhetha i-Apantac T # i-Multiviewers
next: I-ABS Network inikela i-SIS LIVE i-Edge Edge kwiNgcaciso yeMidlalo kwiMbindi Mpuma
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Ukuguqula Ukugcinwa Kwintlawulo Yokhuphiswano". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/turning-storage-in-competitive-vantageage/. Enkosi.